कोरोना नियन्त्रणमा १३ अर्ब खर्च, कुन निकायले कति खर्च गरे ? « Pen Nepal
कोरोना नियन्त्रणमा १३ अर्ब खर्च, कुन निकायले कति खर्च गरे ?
Published On : 21 August, 2020 8:27 pm By : पेननेपाल
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत साउन मसान्तसम्म गरी उक्त रकम खर्च भएको सरकारका प्रवक्ता डा। युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दी र ग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सि